Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada Yemen ooKulankoodii Todobaadlaha Ahaa U Qabsoomay.
Jaaliyada Yemen ooKulankoodii Todobaadlaha Ahaa U Qabsoomay.
Posted by ONA Admin	/ February 9, 2019
Jaliyada Soomaalida Ogadenia ee dalka Yemen ayaa shalay jumcihii isugu yimid kulankoodii todobaadlaha ahaa. kulankan waxaa soo agaasimay maamulka Jaaliyada Soomaalida Ogadenia Yemen waxaana kasooqaybgalay dhamaanba jaliyada laamaheeda kaladuwan sida ururka hooyooyinka, ururka OYSU, ururka culimo owdiinka iyo dhamaanba laamaha ay jaliyadu kakoobantahay.
Shirka waxaa daadihinhayay gudoomiya jaliyada mudane Cabdi Najiib Sakariye isagoona sidiiran ooga warbixiyay halganka Soomaalida Ogaadeeniya iyo marxaladaha uumarayo kadib waxaa lagusoo dhaweeyay Sheekh mahamad hadana waxaa lagusoo dhaweeyay hogaanka warfaafinta oo isaguna warbixinadii udanbeeyay sidiiran ula wadaagay bulshada.
Waxaa kale oo kahadlay hogaanka abaabulka mudane Axmednuur Ali Yuusuf oo siheersara ah ooga hadlay qaybta abaabulka iyo midnamada iskuduubnida umada Soomaalida Ogadeniya isaga oo tilmaamay inay tahay furaha guusha ee lagaga xoroobayo Gumaysiga Itoobiya.
Waxaa iyana kahadashay marwo Nimco Ibrahim Sheekh oo ah hogaanka dhaqaalaha iyadoo qaaday hees wadaniya oo aad loogu diirsaday waxaa kaloo shirka kahadlay xubno aad utirabadnaa waxayna dhamaantood isku raaceen sidii loosii xoojin lahaa halganka ay hormuudka katahay JWXO shirkan ayaa wuxuu kusoodhamaaday guul iyo gobonimo